Namatrapatratra ny Me Olala : « fanjakana tsy tan-dalana ny misy eto » | NewsMada
Namatrapatratra ny Me Olala : « fanjakana tsy tan-dalana ny misy eto »
Natsinkafon’ny Me Razafinjatovo Willy na i Olalah ny fomba ratsin’izao fitondrana izao. “Mihemotra ny laharantsika eo amin’ny fanajana ny tany tan-dalàna. Tsy voahaja koa ny zon’olombelona . Isan’andro, ahitana taratra izany. Mahazo laka ny tsy fanarahan-dalàna sy fanitsakitsahana lalàmpanorenana” , hoy izy, omaly.
Anisan’ny notanisainy sy ohatra amin’izany ny tsy fampiharana ny didim-pitsarana. Teo, ohatra, ny didy noraisin’ny filankevi-panjakana amin’ny famerenana ireo mpiasan’ny kaompania Air Madagascar hiasa sy hisitraka ny zony. “Tsy notanterahina anefa izany ary mbola mitohy hatramin’izao”, hoy ihany izy.
Tsy izany ihany fa ny nihatra amin’ny antoko Tim, tamin’ny taon-dasa, ary mitohy hatramin’izao taona vaovao izao ny tsy fanajana ny tany tan-dalàna. Samy efa namoahan’ny fitsarana didy avokoa ny fitarainana napetrak’ity antoko naorin-dRavalomanana ity saingy tsy noraharahana. Anisan’izany koa ny resaka trano etsy Ankorondrano…
Tsy mijery ny sosialim-bahoaka…
Ankoatra ireo ny tsy fanajana ny zon’olombelona sy ny fahafahana ary ny fahalalahana na ny tsy fahazakana demokrasia. Ohatra, ny “Raharaha Antsakabary”, ny sakantsakana natao an-dRavalomanana tany atsimon’ny Nosy.
Manampy trotraka ireo koa anefa ny tsy fijeren’ny mpitondra ny fiainam-bahoaka, araka ny nambaran’ity mpahay lalàna ity. Nohitsiny fa maika amin’ny tombontsoany ireo mpitondra ireo. Manoloana izany, miantso ny vahoaka ny Me Olalah mba tsy hiandany na hiaraka amin’izao fitondrana izao intsony amin’ny fifidianana. “Tongava maneho ny safidintsika fa tsy tokony hitantana firenena hatrany amin’ny taona 2030 izany ireo. Aza mifidy voay hihinana antsika...”, hoy izy.
Une réponse à "Namatrapatratra ny Me Olala : « fanjakana tsy tan-dalana ny misy eto »"
Nix 09/02/2018 à 09:03
tiako be ilay fahasahiana tsy misy fiantsarambelatsihy